Fitohanana 12 KM – Malag@sy Miray
Niala sasatra tany amin’ny faritany ny filoham-pirenena ary nody teto an-drenivohitra omaly antoandro. Mendrika izany ny olona rehetra, fa ny tena nahasorena ny maro sy nampivalaketraka ny maro dia ny fitohanan’ny fiara naterak’io fodiany io. Ny Radio Don Bosco aza moa dia nilaza sy nanome tarehi-marika mihitsy fa nahatratra 12 KM ny halavan’ny fiara nadritra io fotoana io. Tsy mbola nisy toy izany raha teto Antananarivo fotsiny, ary angamba nanerana ny Nosy. Ny isaorana ny fiadidiana ny Repoblika kosa dia ny nabdraisany an-tànana ny fitsaboana ilay mpanao hira gasy voadonan’ny fiara mpanokatra làlana nialoha azy tetsy 67 Ha.
Nanome kajy tsotra monja ny isan’ny olona nitohana vokatr’izany moa io onjam-peo io ka nitontaly hatrany amin’ny 10.000 mahery tany rehefa natambatra ny olona tany anaty fiara miampy ireo mpiandry fitateram-bahoaka sy ny mpitazana teny amoron’ny arabe. Tiako be raha mba be mpanotrona toy izany koa aho rehefa tonga avy manao fialan-tsasatra.
Na andro Paska avy any Antsirabe ary tsy misy an’izany! 😀
Tsia kosa! izahay izao efa tratran’izany mihoatra lavitra an’Imeritsiatosika dia efa nikatso ny fiara nodiana ny alatsinainy ny paska!
fa izany eo ihany fa omaly ihany raha nisy toerana nalehako tamin’ny enina ora hariva no nody avy niasa ny filoha Ravalomanana hanavatsava iny Pergola iny. Nisy fiara tsy nahay nijanona fa nivoaka daholo ireny mpiambina mipalitao sy mikiravato rehetra ireny. Dia nivoaka ny fiara avokoa ny mpiabina mitana ny Kalakhnikov. Izaho amin’io vao nampirina ny fakantsary fa raha tsy izany efa nalaiko sary ny paozin-dry zalahy. « En etat de guerre » mandrakariva ny fijery an-dry zalahy teo an!
Angamba koa nisy ilay fiarana dipalomaty frantsay nandona olona teny Ankorondrano iny dia vao maika mailo ry zalahy ankoatra ny nandonana olona afovoan’ny arabe. NIjanona ve ilay zalahy sa mbola nihazakazaka niampita ihany?
Nanome kajy tsotra monja ny isansquowhawydny olona nitohana vokatrsquowhawydizany
Isan’ny olona mitohana? Asaivo mankany amin’ny Courts fa ny Courts hono, mampivoaka isan’andro.
Tsy ratsy indray iny tsilalaon-teny nataon’i Dotmg iny an!